Uninzi lwabasetyhini abaphefumlelweyo kwi "Star Trek"
NgoMatshi yiNyanga yeMbali yabaBhinqa, kwaye sifuna ukuphawula eso sihlandlo ngokugqamisa abanye besifazane abaphefumlelweyo abakwi- Star Trek . I-Wikipedia ichaza iNyanga yeMbali yaBesifazane njenge "nyanga yonyaka evakalisiwe yenkcazo ebonisa ingqalelo yabanikazi kwimicimbi yeembali kunye noluntu lwangoku. Ikhunjulwa ngo-Matshi e-United States, eUnited Kingdom nase-Australia, ehambelana noMhla woLuntu lwaMaTyhini ngo-Matshi 8. . " Nazi abahlanu abafazi abaphefumlelweyo kwizizukulwana ngokusebenza phambi nangemva kwekhamera.
UCaptain Kathryn Janeway (Kate Mulgrew)
Xa i- Star Trek: Uhambo oluhamba phambili, umboniso wazisa umhlaba kwiCaptain Kathryn Janeway. I-Janeway yayingeyona induna yokuqala ye-Starfleet ukuba ibonakale kwisikrini, kodwa yayingowona obalaseleyo. Wabeka ibhinqa njengesikhokelo kwinqaku le- Star Trek okokuqala. Kwakuyinyathelo elinenkalipho, nangama-1990. Abafazi bekungabonakali kuphela kwindawo yokulawula amandla, kodwa uJaneway wayengusosayensi xa isayensi ithathwa njengengcambu yomntu. Umyalelo wakhe onamandla kodwa ukondla we-USS Voyager waphefumulela isizukulwana sabasetyhini, uthabathela amantombazana amancinane kwi- Star Trek fandom, kunye nesayensi. Ngo-2015, u-astronaut uSamantha Cristoforetti wathumela umfanekiso wakhe kwi-International Space Station egqoke iifenethi ye- Star Trek kwaye ecaphuna uJaneway. Ilifa lomphathi wenziwe kwiinkwenkwezi.
ULt.Tasha Yar (Denise Crosby)
Kwisihlandlo sokuqala se- Star Trek: Isizukulwana esilandelayo , umphathi wokhuseleko ongena kwi- USS Enterprise-D nguTasha Yar. I-Yar yaqhekeza ubunqamle kubalingiswa besifazane kumabonwakude, ngokucacileyo ephefumlelwe ngumbutho onqabileyo oselwandle oluthile uVasquez ngo-1986. URar wayenobungqineli, oqinileyo, kwaye enobuchule. Ngelo xesha, wayenobungozi ebomini bakhe bokuphila njengomntwana njengeenkedama kwihlabathi elibuhlungu elinokulwa. Abasetyhini abaninzi bafumanisa isimo sakhe sengqondo esingaqinisekiyo, kwaye abalandeli bavutha ngenxa yokufa kwakhe okungathandekiyo kwi "Skin of Evil." UCrosby ubuyele ukudlala umdlalo kwakhona kwi "Yoshishino Yobusuku," kunye ne-Yar's half-Romulan intombi kwii-episodes ezizayo. Kodwa sinokumangaliswa indlela uYam owayengummangaliso ngayo.
U-Majel Barrett ube yinxalenye ye Star Star eTek ngendlela ethile ukususela ekuqaleni, nangaphambi kokuba umboniso ubonwe. Ekuqaleni, uRoddenberry wayefuna ukuba adlale Inombolo yokuqala kwinqaku lokuqala, isibini kwisibini. Ngelishwa, i studio ayikwazanga ukuyichaphazela ingcamango yowesifazane edlala indima ehamba phambili kuma-1960, kwaye indima yakhe yachithwa kumqhubi we-re-vamped. Waqhubeka edlala uMhlengikazi Christine Chapel kwisiqulatho sokuqala se Star Star. Kamva waphinda wabonakala njengoLwaxana Troi kwi Star Star: Isizukulwana esilandelayo kunye ne- Star Trek: Deep Space Nine . Kwakhona wabonisa ezininzi iikhomputha kulo lonke uchungechunge. Njengomfazi we- Star Trek umdali uGen Roddenberry, wayesebenza emva kweembononongo ngokunjalo, emfumana isiteketiso "uMongameli wokuqala we-Star Trek."
Amanqaku amaninzi e- Star Trek ayaqhelana negama elithi DC Fontana, nokuba ngaba bengamazi umntu osemva kwegama. DC Fontana uye wabhalela iTrk ukususela ekuqaleni kwaye uye waphuma kwiimali ezibhalwe ngamaxesha amaninzi. Enyanisweni, DC Fontana nguDorothy Catherine Fontana. Wamukela i-pseudonym "DC Fontana" ukuphepha ukunyanelana ngokwesini kwimboni yeTV. Wayengumlobi onzima xa efika unobhala kaGene Roddenberry waza waqala ukusebenza kwi- Star Trek yasekuqaleni. Waphenduka enye yeengcamango zakhe kwinqaku "uCharlie X." Emva kokuphinda kubhale kwakhona "Le Nxalenye yeParadesi," uRoddenberry wamnika umsebenzi womhleli webali. Waqhubeka esebenza emva kokurhoxiswa kwemiboniso njengomhleli webali kunye nomvelisi onxulumene ne- Star Trek: I-Series ye-Animated . Kamva wabuya njengomlobi kunye nomhlobo onxulumene ne- Star Trek: Isizukulwana Esilandelayo kwaye wabhala isiqephu se Star Star: Deep Space Nine . Uze wabhalwa kwiimidlalo ezininzi ze- Star Trek kunye neveli. Kwababhali besifazane abakhulayo kwi- Star Trek , uyabakhuthaza ukuba yintoni eya kuyenzeka.
Uhura (uNichelle Nichols)
Kwisiqalo sokuqala, uLt Uru wayekhonza njengegosa loqhagamshelwano. Nangona u-Uhura wadlala indima encinci (wayenqabile ukuba ahambe okanye ayenamabonakude ezenzo), wayebaluleka kakhulu ngokwembali yeTV. Wagxininisa ubunjani bemveli yoluntu ngexesha lokuba loo nto yayingavamile. Wayengomnye wabalinganiswa bokuqala base-Afrika nabamaMerika kwindawo ephethe amandla kumabonwakude aseMerika kwiminyaka engama-60. Umdlali weKomidi kunye nomdlali wezobuqhawe u-Whoopi Goldberg ukhumbula ukuxelela intsapho yakhe, "Ndabona nje umfazi omnyama kumabonwakude, kwaye akayintombi!" Inkokeli yamalungelo oluntu uDkt Martin Luther King ngokwakhe wadibana noNichols waza wamqinisekisa ukuba ahlale kulolu chungechunge ngenxa yokuba wayekholelwa ukuba ubonisa ukuvisisana ngokobuhlanga ngekamva. I-NASA kamva yazisa uNichols kwiphulo lokukhuthaza abafazi kunye nabase-Afrika baseMerika ukuba bajoyine. Umfazi wokuqala wase-Afrika-waseMerika ukuba aqhube kwi-Space Shuttle, uDkt. Mae Jemison, uthe uphefumlelwe yi- Star Trek (no-Uhura) ukujoyina inkqubo yesikhala.
Aba bafazi abahlanu bazisa izizukulwana zabafazi kwizesayensi kunye neengcali-zinyani, kwaye baqhubeka bekwenza njalo, benze utshintsho kwihlabathi lenene.
Imigaqo yokuba iAlimpiki Divers kufuneka ilandele
Amandla eNkcazo: I-African American News Publications kwi-Jim Crow Era
Saturn kwiNdlu yeshumi elinesibini